A ga-etinye Nnyocha siri ike n'okporo ụzọ awara awara Bayram | RayHaber | raillynews
HomeGeneralA ga-etinye nnyocha siri ike n'okporo ụzọ awara awara n'oge ememme
23 / 05 / 2020 General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, OGBU NIILE, Turkey
N'oge ezumike ahụ, a ga-arụ ọrụ nlebara anya siri ike n'okporo ụzọ awara awara
N’agbanyeghi na enwere usoro iwu n’obodo a n’oge Eid al-Fitr, a ga-emechi nlezianya anya n’okporo ụzọ.
Onu ogugu ndi uwe ojii na ndi Gendarmerie kwa ubochi ndi n’emeghe Eid 18 puku 564 ndị ọrụ na-ahụ maka okporo ụzọ ga-eso, n'oge ezumike ahụ, ndị uwe ojii na gendarmerie 111 puku 384 ndị ọrụ ga-anọ ọrụ.
Na njem njem n'etiti ndị njem % 50 ikike itinye n'ọrụ ga-aga n’ihu. A ga-enyocha akwụkwọ ikike nke ụmụ amaala anyị dị afọ 65 gbagoro na ndị ahụ nyere ikike njem njem n'ihe niile gbasara iwere ihe ubi. Ngwa ụgbọ ala anaghị agba agba ga-aga n’ihu n’obodo ebe a na-etinyekarị okporo ụzọ. N'ọnọdụ a 767 iberibe Edobere ụgbọala uwe ojii ahụ n'okporo ụzọ Ọ bụ ezie na enwere oge idegharị na mba ahụ, ìgwè ndị na-ahụ maka okporo ụzọ ga-aga n'ihu na-achịkwa ụzọ ha n'oge Oriri Ramadan. Karịsịa ezumike a; Site na akwụkwọ ikike njem njem, aga-enyocha nyocha n'okporo ụzọ iji gbochie ihe ọghọm ndị ọ nwere ike ịbụ n'ihi oke nke ndị gbara afọ 65 ma karịa ka ha na ndị otu ha gaa ebe ha chọrọ, na ndị a gụpụrụ site n'oge mmachi maka ndị na-aga owuwe ihe ubi.
N'oge Eid al-Fitr, ọnụ ọgụgụ ndị uwe ojii na-eme ngagharị nke kwa ụbọchị na njikwa okporo ụzọ Ndị ọrụ okporo ụzọ 18.564 ga-anọ n'ọrụ. Ngụkọta n'oge ezumike 59.052 otu egwuregwu / otu na ndị uwe ojii na Gendarmerie 111 puku ndị ọrụ 384 ga-anọ.
Ọzọkwa anyị Ozi Nzọcha Ego Ramadan O zigara ndị mgbasa ozi na gọvanọ 81 na mpaghara. Ekwuputara na okirikiri na agbanyeghị na emebere ezumike ahụ maka ụbọchị 23 n'etiti 26-2020 Mee 4, a ga-etinye ihe okporo ụzọ maka ụbọchị 22 n'etiti 27-2020 Mee 6.
A ga-ekenye Otu Nlekọta na Rozọ Etiti
Seehụ nyocha ndị dị na ngere ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke ngalaba iji chịkwaa ndị njem nọ na n'ime obodo ahụ n'ime oke nke usoro nke okporo ụzọ mere iji hụ na ụgbọ njem ụmụ amaala na-enweghị nchebe na usoro iji gbochie mgbasa COVID-19;
n’aka ndị uwe ojii 24 mejupụtara ndị ọrụ 8 otu,
onye gendarmerie 40 mejupụtara ndị ọrụ 20 E nyere ndị otu ọrụ.
Dị ka ọ dị n’oge ezumike ọ bụla, ezumike a ga-elekwasị anya na njikwa ikuku. N'ọnọdụ a 16 site na helikopta dị n'ógbè ahụ 76 Njikwa okporo ụzọ ga-ebu drone na ógbè.
A na-echekwa ụgbọ ala ndị uwe ojii 767 n'okporo ụzọ
A ga-aga n'ihu itinye ngwa ụgbọ ala ka enwee ike ihu ndị ọrụ okporo ụzọ na ebe arụrụala na ihe ọghọm na-abawanye na ebe okporo ụzọ elebara anya. 78 (ndị uwe ojii 767 / gendarmerie 420) na mpaghara 347Edebere ụgbọala ụgbọ ala Model / Model n'okporo ụzọ ebe ihe ọghọm siri ike jiri oriọna na-egosipụta n'ihu na ọnya na-egosipụta.
A Ga-enyocha Akwụkwọ Njem
50% mmejuputa ikike ga-aga n’ihu njem ụgbọ njem dị n’etiti. Na mgbakwunye, n'okporo ụzọ, iwere ihe ubi nke ngwaahịa, wdg, na ụmụ amaala karịa afọ 65. A ga-enyocha akwụkwọ ikike nke ụmụ amaala anyị nke enyerela ikike njem njem. A ga-abawanye njikwa na ọdụ ụgbọ ala na etiti etiti, a gaghị anabata bọs ndị na-anọchi anya na njem ụgbọ mmiri, belụsọ maka ọdụ ụgbọ na ebe kwere. A ga-enyocha bọs niile na njem ahụ, a ga-agwa ndị ọkwọ ụgbọala ha ka ha ghara imebi iwu ahụ, yana ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem ga-eke eriri oche n'oge njem ha. Tụle ihe ọghọm ndị metụtara ụgbọ ala, ọkachasị n'etiti 02.00-08.00 na n'etiti 05.00-07.00, ebe nlebara anya n'ihi ehighị ụra / ike ọgwụgwụ, a ga-akpọ ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'ụgbọ ahụ, a ga-enye njikwa ndị dị mkpa na izu ike. N’okporo ụzọ okporo ụzọ ndị ọrụ na-agba okporo ụzọ, a ga-agbanye mgbama. visibiliti n'egedege ihu, na ndị ọkwọ ụgbọala Egwu Ruru Ize Ndụ A ga-edebe ya ndụ oge niile.
Ihu iru na nkwurita okwu ga-ala
N'oge nyocha ahụ, a na-akwụsị ndị ọkwọ ụgbọala n'akụkụ ebe ebe ndị nsụgharị dị. Ikwurita okwu ihu na ihu Ọ ga-eme ka e guzobe ya, ndị ọkwọ ụgbọala si n'okporo ụzọ dị anya ga-ezu ike.
A ga-aga n'ihu nyocha Radar, ọkachasị n'okporo ụzọ ebe enwere ihe ọghọm ọsọ ọsọ. N’okporo ụzọ ya niile nwere puku kilomita iri na ise n’ogologo Nkezi Ọsọ ga-aga n'ihu na-enyocha ya. N'ime afọ atọ gara aga, a ga-ezube ma rụọ ọrụ dị irè karị ma rụọ ọrụ n'okporo ụzọ 3 na ógbè 18, ebe achọtara ihe mberede dị oke egwu n'oge ezumike.
N’ime ime obodo, a ga-abawanye okporo ụzọ n’okpuru ndị nwụrụ n'ihi okwukwe nke ndị ikwu nwụrụ n'ihi okwukwe anyị. N’ebe ebe ihe ọghọm nke ndị ụkwụ siri ike siri ike, aga-agafe agafe, ndị na-agafe agafe, usoro ụzọ njikọ, ndị nwere nkwarụ na-aga n’ihu na n’ihu, na-emetụta nchekwa nke ndị ji ụkwụ aga, aga-ewepụ ha ozugbo. Nlele na ihe omume gbasara ije ụkwụ na nchekwa ga - aga n'ihu na-akwụsị akwụsị.
A gaghị anabata ụgbọala na-eburu ndị ọrụ ugbo n’oge a ka ọ ga - aga n’etiti 24.00-06.00. Ugbo ala ugbo, traktọ, ndi ozo, wdg. A ga-egbochi ha ikiri n'okporo ụzọ na -eleghara anya ọ bụla.
A Ga-agbaso fficgbọala Ọsọ
Na nyocha nile; Na mmemme izi ihe iji mee ka ndị mmadụ mara banyere okporo ụzọ maka nchekwa okporo ụzọ maka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem Oge ezumike dị mkpirikpi maka ndụ ji njiri mara Life Tunnels ga-eji ya rụọ ọrụ nke ọma. Na-esochi ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ n'okporo ụzọ na nyocha ha n'otu ntabi anya Ntinye Ihe Ntinye Ngwa (UTP)A ga-enwetara ọfụma ma ọ ga-eme nyocha ya site na etiti.
nke etiti Ngalaba Na-ahụ Maka Mpụga okporo ụzọ Ọnọdụ okporo ụzọ na ihe ọghọm gafee mba a ga-agbaso n'otu ntabi anya ma a ga-eweta ihe ntinye.
Akụkụ dị mkpa nke nlezianya iji hụ na gburugburu okporo ụzọ dị mma 34.218 Nye onye nlebara anya nke na adighi anya Anọ m n’ụlọ mana iwu okporo ụzọ dị n’uche m. Nnyocha anyị ji kpọrọ ihe, mmebi ọ bụla ị hụrụ na-azọpụta ndụ. Anyi n’ekele gị maka onyinye gị maka nchekwa okporo ụzọ ma na-achọ gị ezigbo ezumike. Ọ ka mma n’afọ ọ bụla n’Ọzọ A ga-eziga SMS nwere ọdịnaya.
Achọpụtawo ụzọ nyocha ụzọ okporo ụzọ
A na-asacha okporo ụzọ na-aga ọcha na afọ niile na Kocaeli
Ụgbọ njem na 50 na Istanbul
Ụgbọ njem na Antalya
Red Bus, Antray na Nostalgia Tram Na-eri oriri ahụ
Njem na-agafe agafe na njem ụgbọ mmiri, ụgbọ okporo ígwè na oriri ọha na eze
Ụgbọ njem ọha na eze na Manisa
Obodo Buses na Tram Free
Transportationgbọ njem ụgbọ elu n'etiti
ndị ọrụ ugbo oge oge
Vegbọ okporo igwe Model
Ìgwè okporo ụzọ
Imebi okporo ụzọ
Ndụmọdụ Maka ọghọm okporo ụzọ
ihe mberede okporo ụzọ
Iwu okporo ụzọ
A ga-eme ka ụkọ mmiri mmiri 6 gbasaa na Kocaeli na December Tọzdee n'okpuru YHT
Ụgbọ njem na-aga n'ihu na Kocaeli
Omenala na Trabzon
General Directorate of Highways na-eme tupu nri nri ịdọ aka ná ntị
Ụgbọ njem ọha na eze na Bayram na Mersin Free
Ụgbọ njem ga-enwere n'efu n'oge ememe na Ankara